धमाधम लागू हुँदै स्थानीय पाठ्यक्रम : १०० पूर्णाङ्कमा के-के पढाउँदैछन् गाउँका सरकार ?
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगर परिचय सहितको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ ।
‘हाम्रो तिलोत्तमा’ नाम दिएर कक्षा १ देखि ५ सम्म १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रममा ‘माइ पकेट माइ फस्ट डस्बिन’ जस्ता नगरका सामाजिक आर्थिक विकासका आधारहरू समेटर पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ ।
यसले नगरभित्रका विद्यार्थीले नगरको परिचय विद्यार्थीले नगरपालिकाको भनाइ छ ।
नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘हाम्रो पाठ्यक्रम नगरभित्रै केन्द्रित छ । नगरले अगाडि सारेका आधारहरू पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थी पढ्नेछन् । रुपन्देहीमै रहेको लुम्बिनीको बारेमा हामीले सिकाउनु पर्दैन ।
हामीले हाम्रो नगरमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू वन बाटिका कहाँ पर्छ ? बाउन्नकोटी वन कहाँ छ । नगरपालिकाको कार्यालय कहाँ भन्ने जस्ता कुराहरू विद्यार्थीले सिकुन् भन्ने हो ।’
यसले नगरको ज्ञानमा विद्यार्थी निपूर्ण हुने उद्देश्य नगरको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशकै रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले खाम भाषाको पठनपाठन गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा छ ।
खामभाषी मगर समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको गाउँपालिकामा खाम भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाउन थालेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्ती मगरले खाम भाषा पनि धेरै प्रकार रहेकाले त्यसको खोजी भइरहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘खाम भाषाका पनि फरक–फरक प्रकार छन् । रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ र पाल्पामा फरक–फरक बोलिन्छ, त्यसमध्ये एउटालाई अन्तिम रूप दिएर पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नेछौं ।’
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा ८५ प्रतिशत जनसंख्या मगर समुदायको छ ।
स्थानीय स्तरबाट मातृभाषामा पढाउन माग आएपछि गाउँपालिकाले गाउँमा तीनवटा विद्यालय जौपोखरा आधारभूत विद्यालय, नवजागृति प्रावि र धारादेवी माविमा मगर भाषामा पढाई हुन्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापाले स्थानीय भुगोल परम्परा, भाषा र लिपिलाई समावेश गरी पाठ्यक्रम तयार गरिएको बताए ।
‘हाम्रो पालिकाका पहिचान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयारी गरी पठनपाठन शुरू गरिएको छ,’ थापाले लोकान्तरसँग भने ।
रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाले तीन वर्ष अगाडिदेखि बौद्ध शिक्षा देवदह परिचय पाठ्यक्रम तयारी गरी लागू गरेपछि त्यहाँका विद्यार्थीले देवदहको समग्र परिचय दिन सक्ने र बौद्ध शिक्षाको आधारभूत ज्ञान उनीलाई भएको छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले भनिन्, ‘बालबालिकामा निकै राम्रो प्रभाव परेको छ । विद्यार्थी नैतिकवान बन्दै गएका छन् । यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।’
अंग्रेजहरूलाई पराजित गरेको जीतगढी किल्लाको जानकारीसहित बुटवल उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको हाम्रो बुटवल स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यार्थीको रोजाइमा परको छ । नगरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई यो विषयको पढाइ रुचिकर बनेको छ ।
नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बुटवलको महत्त्व र पहिचान झल्किने विषयहरू पाठ्यक्रममा रहेको बताए । संघीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयहरू हाम्रो पाठ्यक्रमले समावेश गरेको छ ।
जीतगढी किल्ला, मणिमुकुन्देसन उद्यान, हिलपार्क, सिद्धबाबाको पहिचान समावेश छन् । यी क्षेत्रको विषयमा विद्यार्थीहरू निपूर्ण हुनेछन्,’ सुवेदीले भने, ‘ज्ञान, सीप व्यवहार तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता आफ्ना सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्दै बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि पाठयक्रमले निर्देशन दिने हो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएको अवस्थामा आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले दिएको एक सय पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरबाटै निर्माण गरी लागू गर्ने भन्ने प्रावधान छ ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहको परिचयमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सीप, रोजगारी र भाषा संरक्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । बत्ती काट्न, टपरी गाँस्न सिकाउने जस्तो हुनुपथ्र्यो, त्यस्ता विषय धेरै स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा पाइएन ।’
कंडेलले थपे, ‘विद्यार्थीलाई अतिरिक्त भार थप्ने काम मात्र भएको छ । कल्पना गरिएजस्तो पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा बनेनन् ।’